बीमा समितिको नियमन फितलो | गृहपृष्ठ
Home समाचार बीमा समितिको नियमन फितलो
on: २१ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०९:१६ समाचार
बीमाको दायरामा समेटियो चलचित्र क्षेत्र -
सामाजिक अन्तरघुलन र मित्रताको साझा पर्व -
भारतीय नोट ल्याउन र लैजान दिने व्यवस्था : ‘आरबीआईको व्यवस्था स्वीकार्दै बार्गेनिङमा जाऊ’ -
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूमाथि बीमा समितिको नियमन फितलो देखिएको छ । समितिले बीमा कम्पनीको कार्य सम्पादन नतीजा र लेखापरीक्षण गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न निर्देशन नदिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थानको रूपमा रहेका दुई र निजीक्षेत्रको एक बीमा कम्पनीले विगत केही वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । समितले पुनर्बीमाको गणना दुरुस्त राख्न, बीमाको संस्थागत सुशासनअनुसार विभागीय संरचना खडा गर्न र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । साथै, लेखापरीक्षण नगर्ने बीमा कम्पनीहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले आवश्यक कार्यमा रकम नछुट्याई सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । समितिले आयबाट खर्च कटाई आव २०७१/७२ मा रू. ३२ करोड ९ लाख, २०७२/७३ मा रू. ५० करोड ९० लाख र आव २०७३/७४ मा रू. ६५ करोड ७७ लाख सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार समितिले प्रत्येक वर्ष बचत रकम बढाउँदै हालसम्म सञ्चित कोषमा रू. ३ अर्ब १९ करोड पुर्‍याएको छ ।
समितिले भवन निर्माण, सङ्घीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापनालगायत गर्नुपर्ने छ । महालेखाले उक्त कार्यक्रमका लागि बढी पैसा आवश्यक पर्ने हुनाले बचत रकम सञ्चित कोषमा दाखिला नगर्न जानकारी दिएको थियो । तर, समितिले वर्षेनि बचत रकम बढाउँदै गएको र सोको लागि कार्ययोजना पनि स्वीकृत नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।